स्टारडमको ईंटा थप्दै साम्राज्ञी, पाइन् लगालग सफलता « Ramailo छ
स्टारडमको ईंटा थप्दै साम्राज्ञी, पाइन् लगालग सफलता
पहिलो फिल्म ‘ड्रिम्स’ बाटै ‘नोटिस’ भएकी नायिका हुन् साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह । उनी अनमोल केसीको स्टारडमको छायाँमा परिनन् । ‘ड्रिम्स’ बाट साम्राज्ञी चम्किइन् । पहिलो फिल्मबाट वाहीवाही कमाएकी साम्राज्ञीको दोश्रो फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ प्रतिक्षामा थियो । धेरैले यो फिल्मलाई साम्राज्ञीको स्टारडमको परिक्षाको रुपमा हेरेका थिए । के साम्राज्ञी परिक्षामा पास भइन् त ?
आफ्नो स्टारडमको परिक्षामा साम्राज्ञी पास मात्रै भइनन्, उत्कृष्ट अंक ल्याएर सर्वोउत्कृष्ट भएकी छिन् । उनले आफ्नो स्टारडमलाई कायम राखिन् र बनिन् लगालग दोश्रो सफल फिल्म दिने नायिका । नव नायक सलिनमान बनियाँ अपोजिटमा रहेको साँगीतिक प्रेम कथाको फिल्मले दोश्रो सातामा पनि हलमा दर्शकलाई तानिरहेको छ । ‘ए मेरो हजुर २’ ले पहिलो साता पाँच करोड माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भयो । यो कलेक्सन सुपरहिट फिल्मको हो । दुई फिल्म सुपरहिट भएसँगै साम्राज्ञी स्टार नायिकाको रुपमा दहरिएकी छिन् । नयाँ पुस्ताकी उनी स्टार नायिका हुन् । साम्राज्ञी अभिनित तेश्रो फिल्म ‘तिमी सँग’ यही साल प्रदर्शनमा आउँदैछ । साम्राज्ञी र सलिनसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी :
उसो त एउटा फिल्म सुपरहिट हुनुको क्रेडिट कुनै एक स्टार, ब्यानर या निर्देशकलाई मात्र जाँदैन् । यसको श्रेयाको भागिदार वेटरदेखि डिरेक्टरसम्म हुन्छन् । तर फिल्म चल्नु पुर्व कसको काँधमा कत्रो भारी बोइएको थियो भन्ने लेखाजोखा चाहि हुंन आउँदछ । ‘ए मेरो हजुर २’ चल्नुपुर्व साम्राज्ञीको स्टारडम र फिल्मले गर्ने व्यापारलाई लिएर निकै चर्चा भएको थियो । डेव्यु निर्देशक झरना थापा, फेसबुक पछि फर्किएका निर्माता सुनिल कुमार थापा, नव नायक सलिनमान, छायाँकार सञ्जय लामा, संगीतकारद्वाय बसन्त सापकोटा र कल्याण सिंह, कोरियोग्राफर कविराज गहतराज र रेनशा वान्तवा राई ए मेरो हजुर २ सफलताका हकदार हुन् । सम्पूर्ण टिमलाई बधाई ! ‘ए मेरो हजुर २’ हल रिपोर्ट :